Dawlada Ingiriiska oo mar kale dadkeeda uga digtay inay u safraan Itobiya. | ogaden24
Dawlada Ingiriiska oo mar kale dadkeeda uga digtay inay u safraan Itobiya.
Nov 27, 2016 - Aragtiyood
Wasaarada Arimaha Dibada ee wadanka Ingiriiska ayaa markale kucelisay digniintii shacabkeeda ay uga digaysay u safarka wadanka Itoobiya, waxayna wasaaradu bayaankeedii ugu dambeeyay soo saartay maalinimadii shalay ay kusheegtay in khatarta Itobiya kasii darayso.
Dowlada Ingiriiska oo kamid ahayd dowladaha ugu dhadhaw xukuumada Wayaanaha ayaa hada u muuqata in ay ogaatay dhaqanka qalafsan ee kooxda TPLF waxayna dowladu shacabkeeda dhowr jeer uga digtay aaditaanka wadanka Itoobiya.
Wasaarada Arimaha Dibada ee Britain ayaa bayaan keeda ku sheegtay in xukunkii deg degga ahaa ee xukuumada wayaanuhu kusoo rogtay wadankaas waxayna wasaaradu sheegtay in ay halis kujiraan muwaadiniinta Ingiriiska ah ee kusugan Itoobiya gaar ahaa Gobolada Oromada iyo Axmaarada.
Dowladaha Maraykanka, Norway, Germany, Canada, Australia iyo wadanka Yuhuuda waxayna dhamaan wadamadanu muwaadiniin tooda uga digeen in ay usafraan wadanka Itoobiya. Sidoo kale waxaa guud ahaan wadanka Itoobiya iskaga baxay dhamaan maal gashadeyaashii shisheeye kuwaas oo hantidoodii u daabushay wadamadoodii.
Kaguuritaanka dadka shisheeyaha ah ee Itoobiya ayaa dhalisay in guud ahaan dhaqaalihii wadanku uu dhulka galo waxaana dhaqaale la’aanta wadanka laga dareemayaa dhamaan dhaq dhaqaaqa ganacsi ee wadanka.
Sikastaba ha ahaatee digniintan ugu dambaysay ee dowlada Ingiriiska ayaa uga siidaridoonta xaaladaha qalafsan ee wadanka Itoobiya.